Ndị mmadụ na -agbago elu n'oge ọrịa na -emepụta ihe ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị mmadụ na -agbago elu n'oge ọrịa na -emepụta ihe ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Bill Gates nwere ozi nye ụwa.
Ọhụrụ data na-ekpughe ụwa agbagoro iji gbochie ọnọdụ ndị kacha njọ ime; ntụpọ ntụpọ dị mkpa maka itinye ego itinye ego ogologo oge iji hụ na mgbake nha anya na ọganiru na-aga n'ihu na Ebumnuche Global, nke a maara dị ka UN Sustainable Development Goals.
Bill & Melinda Gates Foundation bidoro akụkọ mkpesa nke ndị na -eche nche kwa afọ nke ise, na -egosipụta dataset zuru ụwa ọnụ emelitere nke na -egosipụta mmetụta ọjọọ nke ọrịa na -aga n'ihu na ebumnuche United Nations Sustainable Development Goals (Global Goals).
Nkwupụta afọ a, nke Bill Gates na Melinda French Gates, ndị isi oche nke Bill & Melinda Gates Foundation, na-egosi na ọdịiche dị na COVID-19 ka dị oke egwu, na ndị ihe otiti kacha sie ike ga-abụ. jiri nwayọ gbakee.
N'ihi COVID-19, nde mmadụ 31 ọzọ abanyela na oke ịda ogbenye na 2020 ma e jiri ya tụnyere 2019. Ma ebe 90% nke akụ na ụba toro eto ga-enwetaghachi ọkwa mbata ọrịa ọ bụla kwa afọ site n'afọ na-abịa, naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ala- na etiti -atụ anya na akụ na ụba ndị na -abata ego ga -eme ya.
Ọ dabara nke ọma, n'ime mbibi a, ụwa gbalitere iji gbochie ụfọdụ ọnọdụ kacha njọ. N'ime mkpesa ndị na -eche nche n'afọ gara aga, Institute for Metrics and Evaluation (IHME) buru amụma mbelata pasent 14 n'ime mkpuchi ọgwụ mgbochi ụwa - na -ehichapụ afọ 25 nke ọganihu n'ime izu iri abụọ na ise. Nyocha ọhụrụ sitere na IHME na -egosi na mbelata ahụ, n'agbanyeghị na -anabataghị ya, bụ naanị ọkara ihe echere.
N'ime akụkọ ahụ, ndị isi oche na-akọwapụta "ihe ọhụrụ na-akpali akpali" nke enwere ike naanị n'ihi mmekorita ụwa, ntinye aka na itinye ego n'ime ọtụtụ iri afọ. Ha kwenyere na ịgbanahụ ọnọdụ ndị kacha njọ bụ ihe kwesịrị ịja mma, mana ha na-achọpụta na ezughị. Iji hụ na mgbake zuru oke sitere na ọrịa na-efe efe, ha na-akpọ maka itinye ego ogologo oge na ahụike na akụnụba-dị ka nke butere mmepe ngwa ngwa nke ọgwụ COVID-19-iji kwalite mbọ mgbake wee mee ka ụwa laghachi azụ. izute ebumnuche ụwa.
“[Afọ gara aga] emewo ka nkwenye anyị sikwuo ike na ọganihu ga-ekwe omume mana ọ bụghị ihe a na-apụghị izere ezere,” dee oche oche. "Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịgbasa ihe kacha mma anyị hụgoro ọnwa iri na asatọ gara aga, anyị nwere ike hapụ ọrịa a n'azụ anyị ọzọ wee mee ka ọganihu dị ngwa n'idozi okwu ndị dị mkpa dịka ahụike, agụụ na mgbanwe ihu igwe."
Nkwupụta ahụ na -akọwa mmetụta akụ na ụba na -ezughị oke nke ọrịa ọjọọ ahụ metụtara ụmụ nwanyị n'ụwa niile. Na mba ndị nwere ego dị elu na nke na-adịchaghị ala, ndakpọ akụ na ụba ụwa kpaliri ụmụ nwanyị enweela nsogbu karịa ụmụ nwoke.
Melinda French Gates kwuru, "Ụmụ nwanyị na -eche ihe mgbochi ihu n'akụkụ niile nke ụwa, na -ahapụ ha ka ọ bụrụ ndị ọzọ nwere ike ibute ọrịa." “Site n'itinye ego na ụmụ nwanyị ugbu a na ileba anya n'adịghị nhatanha ndị a, gọọmentị nwere ike ịkwalite mgbake ziri ezi ka ha na -ewusi akụ na ụba ha ike megide ọgba aghara n'ọdịnihu. Ọ bụghị naanị ihe ziri ezi ime - kama ọ bụ amụma mara mma ga -abara mmadụ niile uru. ”
Nkwupụta ahụ na-egosikwa etu ihe akpọrọ "ọrụ ebube" nke ọgwụ mgbochi COVID-19 si pụta ọtụtụ iri afọ nke itinye ego, atumatu, na mmekorita nke guzobere akụrụngwa, talent, na gburugburu ebe obibi dị mkpa iji bute ha ngwa ngwa. Agbanyeghị, sistemụ nyere ohere maka mmepe na mbubata ọgwụ mgbochi COVID-19 dị na mba ndị bara ọgaranya, n'ihi nke a, ụwa eritebeghị uru n'otu aka ahụ.
Bill Gates kwuru, "Enweghị ohere ị nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 bụ ọdachi ahụike ọha." “Anyị na-eche ezigbo ihe egwu na ọdịnihu, mba na obodo bara ọgaranya ga-amalite ịgwọ COVID-19 dị ka ọrịa ịda ogbenye ọzọ. Anyị enweghị ike ịhapụ ọrịa a n'azụ anyị ruo mgbe onye ọ bụla, n'agbanyeghị ebe ha bi, nwere ohere ịgba ọgwụ mgbochi. ”
Ihe karịrị 80% nke ọgwụ mgbochi COVID-19 niile ka enyerela na mba ndị nwere ego dị elu na nke etiti n'etiti, yana ụfọdụ na-echekwa ugboro abụọ ma ọ bụ atọ ọnụ ọgụgụ achọrọ ka ha nwee ike kpuchie ndị nkwado; ihe na-erughi 1% nke usoro onunu ogwu ka enyere na mba ndị nwere obere ego. Ọzọkwa, nnweta ọgwụ mgbochi COVID-19 nwere njikọ chiri anya na ebe enwere ọgwụ mgbochi R&D na ikike mmepụta. Ọ bụ ezie na Africa bụ 17% nke ndị bi n'ụwa, dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ihe na -erughị 1% nke ike mmepụta ọgwụ mgbochi ụwa.
N'ikpeazụ, akụkọ ahụ na -akpọ ka ụwa tinye ego na R&D, akụrụngwa na ihe ọhụrụ na ebe dị nso na ndị na -erite uru.
Onye isi ụlọ ọrụ Gates Foundation Mark Suzman kwuru, "Anyị ga-etinye ego na ndị mmekọ mpaghara iji wusie ike ndị nyocha na ndị nrụpụta na mba ndị na-akpata obere ego imepụta ọgwụ mgbochi na ọgwụ ha chọrọ." “Naanị otu ụzọ anyị ga -esi dozie nnukwu nsogbu ahụike anyị bụ site na ị nweta ihe ọhụrụ na nka nke ndị mmadụ n'ụwa niile.
N'ọtụtụ ụzọ, ọrịa na -efe efe nwalere nchekwube anyị. Ma o bibighị ya.
N'ọnọdụ ndị kacha sie ike iche n'echiche, anyị ahụla ihe ọhụrụ na -akpali akpali.
Anyị ahụla ngwa ngwa anyị nwere ike ịgbanwe akparamagwa anyị, dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na obodo, mgbe ọnọdụ chọrọ ya.
Ma taa, anyị nwekwara ike kọọ na ndị mmadụ n'akụkụ ụwa niile na-agbado ụkwụ iji chebe mmepe mmepe anyị mere kemgbe ọtụtụ iri afọ-ma a bịa na SDG, opekata mpe, mmetụta nke ọrịa na-aga n'ihu COVID-19 na-aga n'ihu. gaara abụ nke ka njọ.
Ọ bụ otu afọ nke mere ka nkwenye anyị sikwuo ike na ọganihu ga -ekwe omume mana ọ bụghị ihe a na -apụghị izere ezere. Mgbalị anyị tinyere n'ihe dị ukwuu. Na, dị ka ndị nwere nchekwube na -enweghị ndidi, anyị kwenyere na anyị nwere ike ịmalite ịmụta ihe site na ihe ịga nke ọma na ọdịda nke ọrịa ọjọọ ruo ugbu a. Ọ bụrụ na anyị nwere ike gbasaa ihe kacha mma anyị hụgoro ọnwa iri na asatọ gara aga, anyị nwere ike mebie ọrịa a n'azụ anyị wee meekwa ka ọganihu ọzọ dị ngwa n'ileba anya n'okwu ndị dị mkpa dịka ahụike, agụụ na mgbanwe ihu igwe.
Kedu ihe ngwọta ụfọdụ na -enyere aka n'ọsọ iji kwụsị ọrịa ọjọọ? Lelee Bill Gates na ndị na -eche nche atọ na -akọwapụta ngwa ọrụ eji alụ ọgụ COVID.
Guo akụkọ a:
Data na -akọ akụkọ dị ịtụnanya
N'ime afọ gara aga, ọ gaghị ekwe omume ileghara nnukwu ọdịiche anya ọ bụghị naanị na onye butere ọrịa na onye nwụrụ - kamakwa onye ga -aga ọrụ, onye nwere ike ịrụ ọrụ site n'ụlọ, na onye kwụsịrị ọrụ ha kpamkpam. Enweghi oke nhịahụ ahụike dị ka sistemụ ahụike n'onwe ha, mana ọ were oria ojoo zuru ụwa ọnụ iji chetara ụwa ihe ga -esi na ya pụta.
Ọtụtụ nde ndị ọzọ nọ n'oké ịda ogbenye
Nye ọtụtụ ndị, mmetụta akụ na ụba nke ọrịa na -aga n'ihu siri ike ma na -adịgide. Anyị maara na anyị nwere ike ịdị ka ndị ozi na -atụghị anya na isiokwu a - anyị bụ mmadụ abụọ kacha nwee ọganihu n'ụwa. Ọrịa ọjọọ emeela ka nke ahụ dokwuo anya. Ndị dị ka anyị ebutela ọrịa na -efe efe n'ụzọ dị mma, ebe ndị nke kachasị emerụ ahụ kụrụ nke ukwuu ma ọ ga -abụkwa ndị na -egbu oge ịgbake. Ihe karịrị nde mmadụ 31 gburugburu ụwa abanyela ogbenye ọnụ ntụ n'ihi COVID-19. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke nwere ike nwụọ 70% na COVID-19, mmetụta akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze na-emetụta ụmụ nwanyị na-ezighi ezi: N'afọ a, a na-atụ anya na ọrụ ụmụ nwanyị n'ụwa niile ga-abụ nde ọrụ 13 n'okpuru ọkwa 2019-ebe ụmụ nwoke A na-atụ anya na ọrụ ga-agbake na ọnụego ọrịa na-efe efe.
Agbanyeghị na ụdị dị iche iche na -eyi egwu imebi ọganihu anyị megoro, ụfọdụ akụ na ụba amalitela ịgbake, na -ebuteghachi azụmaahịa na imepụta ọrụ. Mana mgbake adịghị n'etiti - na ọbụladị n'ime - mba. Ka ọ na-erule afọ na-esote, dịka ọmụmaatụ, 90% nke akụ na ụba toro eto ga-enwetaghachi ọkwa mbata nke onye ọ bụla, ebe naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke akụ na ụba na obere ego na-atụ anya ime otu ihe ahụ. Mgbalị mbenata ịda ogbenye na-agbada- nke ahụ pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 700, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na mba ndị na-abaghị ọgaranya na nke etiti, na-atụ anya na ha ga-anọ n'oké ịda ogbenye n'afọ 2030.
Oghere ndị na -eto eto na Mmụta
Anyị na -ahụkwa akụkọ yiri ya ma a bịa na agụmakwụkwọ. Tupu oria ojoo a, itoolu n'ime ụmụaka iri nọ na mba ndị obere ego enwebeghị ike ịgụ na ịghọta ederede, ma e jiri ya tụnyere otu n'ime ụmụaka iri nọ na mba ndị nwere nnukwu ego.
Ihe akaebe izizi na -egosi na mfu mmụta ga -akacha dị n'etiti ndị e kewapụrụ iche. A hụkwara ndịiche mmụta na -eto eto na mba ndị bara ọgaranya, kwa. Dịka ọmụmaatụ, na United States, mfu mmụta n'etiti ụmụ akwụkwọ klas nke atọ nke Black na Latino bụ, na nkezi, okpukpu abụọ nke ụmụ akwụkwọ ọcha na Eshia America. Na mfu mmụta n'etiti ndị nọ na klas nke atọ site na ụlọ akwụkwọ ndị dara ogbenye ji okpukpu atọ karịa ndị ọgbọ ha n'ụlọ akwụkwọ ndị ogbenye dara ogbenye.
Ọtụtụ ụmụaka na -efu ọgwụ mgbochi
Ka ọ dị ugbu a, ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ụmụaka nke ụwa niile dara na ọkwa ikpeazụ a hụrụ na 2005. N'agbata mmalite ọrịa na mgbe ọrụ ahụike bidoro gbakee na ọkara nke abụọ nke 2020, ihe karịrị nde ụmụaka iri atọ gburugburu ụwa agbaghara ọgwụ mgbochi ha - nke ahụ bụ nde iri. karịa n'ihi ọrịa ọjọọ. Ọ ga -ekwe omume na ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị a agaghị enweta ọgwụ.
Mana ebe a, data ahụ juru anyị anya: Otu afọ gara aga, anyị akọpụtala na Institutelọ Ọrụ Ahụike na Nyocha na -eme atụmatụ na mkpuchi ọgwụ mgbochi ga -agbada pasent 14 n'ụwa niile na 2020, nke gaara abụ afọ 25 nke ọganihu gbadara n'ọwara mmiri. Mana dabere na data ọhụrụ, ọ dị ka mbelata mkpuchi mkpuchi ọgwụ mgbochi -ọ na -agbawa obi n'agbanyeghị na ọ bụ naanị ọkara nke ahụ.
Ndị mmadụ na -agbago
Ka anyị na-aga n'ihu na-enyocha data, ọ bịara doo anya na nke a abụghị ọfụma: N'ọtụtụ akara ngosi mmepe, ụwa gbalitere n'afọ gara aga iji zere ụfọdụ ọnọdụ kacha njọ.
Were ọrịa ịba, dịka ọmụmaatụ, nke bụbu otu n'ime ọrịa na -anaghị ahazi nke ọma n'ụwa: 90% nke ọrịa ịba dị na Africa. N'afọ gara aga, Healthtù Ahụ Ike haswa buru amụma oke ọgba aghara na mbọ mgbochi mgbochi ịba nke nwere ike ịmaliteghachi azụ afọ iri - ma bute ọnwụ ọzọ 10 site na ọrịa nwere ike igbochi. Atụmatụ ahụ kpaliri ọtụtụ mba ime ihe iji hụ na ekesara ụgbụ akwa na nnwale na ọgwụ mgbochi ọrịa ka dị. Benin, ebe ịba bụ ihe butere ọnwụ, ọbụlagodi ụzọ ha ga-esi mepụta ihe ọhụrụ n'etiti ọrịa a: Ha mepụtara usoro nkesa dijitalụ ọhụrụ maka ụgbụ akwa ọgwụgwọ ụmụ ahụhụ, na-enweta ụgbụ nde 200,000 n'ime ụlọ n'ofe mba ahụ naanị. 7.6 ụbọchị.
Cotonou, Benin Foto nke Yanick Folly/AFP site n'aka Getty Images
Ha kwesịrị inwe ekele ụwa.
N'ezie, oke mmetụta ọrịa na -efe efe na SDG ga -ewe ọtụtụ afọ iji ghọta nke ọma, ebe data ka mma na -adị. Na data a anaghị ebelata ezigbo nhụjuanya nke ọrịa ọjọọ butere ndị mmadụ ebe niile -ebe dị anya na ya. Mana eziokwu ahụ bụ na anyị nwere ike tụọ aka na akara dị mma n'etiti ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ otu ọgbọ bụ ihe pụrụ iche. Iji otu aka kee ha n'azụ, imerime ndị mmadụ, otu na mba dị iche iche gara n'ihu na -aga n'ihu imepụta ihe ọhụrụ, imeghari, ma wuo sistemụ na -eguzogide, na maka nke ahụ, ha kwesịrị inwe ekele ụwa.